Obibi Gụnyere usoro nke otu obodo Mani, echiche a tụpụtara dị ka ọtụtụ iberibe okwute n'otu n'otu na-agagharị gburugburu ọnụ ụzọ, ọnụ ụzọ na obibi. Mpempe akwụkwọ obibi siri ike nke obibi ahụ na-emeghe mkparịta ụka na gburugburu obibi ha, ebe ụda nke oghere ha na-eme ka o doo anya na nzuzo ma ọ bụ na-akpọ oku na ngosipụta nke mbara igwe, na-ewulite ahụmịhe kpọmkwem nke akụkọ na-esote na iche iche. Obodo ahụ dị na Navarino Residences, nchịkọta nke ụlọ ndị mara mma maka inwe nkeonwe na obi nke ebe ezumike Navarino Dunes.
Ụlọ Ahịa Ọdịdị ahụ na-agwakọta ndị ugwu ọwụwa anyanwụ na ịdị nwayọọ na amara nke South iji mee ka ndụ jupụta. Ọdịdị mara mma na nhazi kọmpat na-agbatị ime ụlọ ahụ. Onye mmebe ahụ na-eji nkà dị mfe na nke mba ụwa na ihe dị ọcha na ihe ndị dị larịị, nke na-eme ohere ahụ dị mma, oge ezumike na pụrụ iche. Ebumnuche a bụ ụlọ ahịa na-enwe mita 600, ọ na-ezube imepụta ebe a na-ere ahịa ọwụwa anyanwụ nke oge a, na-eme ka obi onye obibi ahụ jụụ ma tụfuo mkpọtụ dị n'èzí. Jiri nwayọ ma nwee obi ụtọ na ndụ mara mma.
Ụlọ Ọrụ Ire Ere Ebumnuche a chọrọ inyocha otu esi eweta ahụmịhe anụrị nke ime obodo na-adịghị mma, nke na-eme ka ndị mmadụ na-agbaso ndụ dị mma ma na-eduga ndị mmadụ ịkwaga n'ebe obibi ọwụwa anyanwụ. Onye na-ese ihe na-eji nka mara mma na nke ocha. Na-elekwasị anya na mmụọ ma na-eleghara ụdị ahụ anya, atụmatụ ahụ na-agwakọta ihe ndị dị na Zen na ọdịnala tii, mmetụta ịhụnanya nke ndị ọkụ azụ, nche anwụ akwụkwọ mmanụ. Site na nhazi nkọwa, ọ na-edozi ọrụ na aesthetics ma na-eme ka ndị dị ndụ nka.
Villa Ihe eji eme ihe na - eji usoro ihe eji eme ihe dika ihe eji emeputa ihe omuma. Ọ na - anabata ihe achara, orchid, ifuru plọm na okirikiri ala. A na-etolite ngebichi dị mfe site na mgbakwunye nke ọdịdị achara site na ibelata ụdị ihe ahụ ma kwụsị ebe ọ kwesịrị ịkwụsị. Ime ụlọ obibi na ime ụlọ erimeri ụlọ na elu na-akọwa oke ohere ma na-egosipụta oghere ebe ọwụwa anyanwụ nke na-adịchaghị na patchwork. Gburugburu isiokwu nke ibi ndụ dị mfe ma na-ejegharị ejegharị, Usoro ndị na-agagharị agagharị doro anya, ọ bụ nyocha ọhụrụ maka gburugburu ebe obibi ndị mmadụ.
Ulo Nke a condominium mejupụtara nke 4 ala ibu atọ-storied ụlọ na-eguzo na saịtị dị nso na etiti obodo. Osisi cedar gbara gburugburu n'èzí ụlọ ahụ na-echebe nzuzo ma na-ezere mmebi iwu nke ahụ ụlọ n'ihi ìhè anyanwụ. Ọbụna site na atụmatụ nwere akụkụ anọ, gburugburu 3D-iwu emere site na ijikọ ogige dị iche iche dị iche iche, ime ụlọ ọ bụla na steepụ steepụ na-ebute oke nke ụlọ a kachasị. Mgbanwe nke facade nke osisi cedar na oke a na-achịkwa nwere ike ikwe ka ụlọ a nọgide na-abụ ihe ọkụkụ ma jikọta ya na obere oge na-agbanwe n'obodo ahụ.
Osoro Sistemụ Eji Emeghe Tableware Satọdee 18 Septemba
Coca-Cola Tet 2014 Nnabata Ihe Ọ Drinkụ Drinkụ Dị Nro Fraịdee 17 Septemba
5 Elemente Mmanya Mmanya Tọọzdee 16 Septemba
Ụlọ Ọgbakọ Ntụrụndụ Obibi Ụlọ Ahịa Ụlọ Ọrụ Ire Ere Villa Ulo